UMTSHAKAZI UYA KWINTSHOLONGWANE EMVA KOKWAZISA UMFAZI NGENTOMBI - IINDABA ZOMTSHATO
Eyona Iindaba Zomtshato Umtshakazi uya kwiNtsholongwane emva koKwazisa uMfazi ngeNtombi: Funda iReddit Thread
(Ityala: Imifanekiso kaGetty)
Ngu: Joyce Chen 03/07/2019 kwi-5: 45 PM
Yishiye kwi-Intanethi ukuze wenze umsebenzi ofanelekileyo wokugcina i-to-weds ijongiwe, ngakumbi xa bephuma emgceni. Injalo imeko yomnye umtshakazi, owakhe akukho nto, iposti yakutshanje kwiReddit ngokukhawuleza wabamba ingqalelo abasebenzisi eqongeni.
utshata njani e-Arkansas
Umtshakazi wabeka imeko yakhe kumsonto Ngaba ndingumngxunya ka-A ngoFebruwari, ebuza ukuba ingaba kwakubi na ukushiya omnye wabahlobo bakhe abasenyongweni kumtshato wakhe-ngenxa yomzimba wakhe.
Okwangoku ndiphakathi kokucwangcisa umtshato wam, endiza kutshata nomyeni wam ukumisela umhla weli hlobo lizayo, iposti iyafundeka. Ndichithe ezona veki zimbalwa zidlulileyo ndihlangana nabahlobo ukwenza yonke into ‘uzakuba ngumtshakazi wam?’ Into. Umtshakazi ucacisile ukuba icala lakhe kwitheko lomtshato lalinomxube wabahlobo abavela emsebenzini, ekholejini, kunye nasebuntwaneni, kunye nabahlobo bakhe bobabini ababalaseleyo ebuntwaneni ababonakala ngathi bayazifaka izihlangu kwiindawo ezinqwenelekayo.
Nangona kunjalo, nangona wabuza omnye umhlobo, uKristy, wakhetha ekugqibeleni ukuba angabuzi omnye umhlobo, uErin, ongasondelanga kuye. Ubuhlobo babo obuphelileyo ayisosizathu sokuba akhethe ukungaceli u-Erin ukuba abe ngumtshakazi wakhe, nangona kunjalo; Endaweni yokuba kungenxa yokuba u-Erin unamabele amakhulu, wabhala umtshakazi.
Uye wachaza ukuba u-Erin ujongene nengxaki yehomoni. Nditsho no gqirha ucebisile ukuba afumane utyando lokunciphisa amabele… ubhale watsho u-Erin ngenxa yokoyika ukuya phantsi kwemela. Ngenxa yoko, umtshakazi wayechaza indlela umzimba ka-Erin owawubeka ngayo ingxaki enkulu xa wayefumanisa iilokhwe zomtshakazi, kwaye ke ngoko wagqiba kwelokuba olona khetho lulungileyo ayizukubuza u-Erin kwaphela.
Ekuqaleni bendiceba ukucela u-Erin ukuba abe ngumtshakazi, kodwa ke ndiye ndaqala ukucinga malunga nendlela yokufumana ilokhwe yempelesi elungele ubukhulu bayo kunye nendlela angazokwazi ngayo ukunxiba ilokhwe engenamtya kuba engakwazi ukwenza ibras . U-Erin naye kufuneka asebenzise iipads ezizodwa zamaqhina ebrust angaqinisekanga ngawo, anokufuna ilokhwe enemikhono.
iingoma zomyeni zokuhamba ezantsi
Yandigxininisa kakhulu, kwaye ndavakalelwa kukuba kuya kuba ngumda ongenakufumaneka ukufumana isisombululo esingayi kuhlazisa ngandlela thile kunye / okanye simgxothe uErin, uqhubeke.
Mhlawumbi eyona ntetho igxibha umtshakazi, nangona kunjalo, yayixa xa wabhala kamva, Xa abantu becinga ngasemva emtshatweni wam, ndifuna ukuba bacinge ngendlela eyayimnandi ngayo indawo leyo, okanye ukuba yayimnandi kanjani ipati yomtshato, okanye (ndingatsho) Umlingane kwaye ekugqibeleni ndiyadibana! Andifuni ukuba abantu bakhumbule umtshato wam wentombi nomakoti omkhulu.
Abasebenzisi beReddit batyhalela umtshakazi kwangoko, bembiza ngokuba ngabantu abazicingela bodwa kwaye krwada.
UJoseph gordon-levitt utshatile
Ndineentombi ezizi-4 kunye nomtshakazi o-1, kubhale umsebenzisi omnye. Omnye wabamolokazana bam (MOH wam) ungungqingili kwaye ngelixa ndihlala ndihlekisa ngokumnyanzela ukuba anxibe, andizange ndiyiqwalasele. Ke bendinamantombazana ama-3 elokhwe kunye ne-MOH yam kunye nomtshakazi eblukhweni kunye neqhosha elineqhosha. Umtshato wam wawumhle kakhulu kwaye kusathethwa ngawo nanamhla. Akukho mntu ukhankanya iimpahla zabo nangona.
Funda isikhokelo sokuziphatha somtshakazi ukuba ungumtshakazi, kwaye ukhusele umbono wakho womtshato ngokuqalaUhlobo lweKnot's Quiz, apha.
Iibhokisi zekhadi lesipho somtshato
sisiphi isandla onxiba umsesane wokuzibandakanya
Isipho seminyaka esi-2 somyeni
Umama kunye nonyana ingoma yomtshato